भोलि शताब्धिकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण,कुन राशीलाई के फल मिल्छ ? - samayapost.com
भोलि शताब्धिकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण,कुन राशीलाई के फल मिल्छ ?
समयपोष्ट २०७५ साउन १० गते १५:०७
शुक्रबार राति १२ बजेर ९ मिनेटमा चन्द्रग्रहणले स्पर्श गर्ने समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । खग्रास चन्द्रग्रहणको सम्मिलन १ बजेर १५ मिनेटमा हुनेछ । खग्रास चन्द्रग्रहणको समाप्ति राति २ बजेर ५८ मिनेटमा हुनेछ । राति २ बजेर ८ मिनेटमा ग्रहणको मध्य र ४ बजेर छ मिनेटमा अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो ।
टेलिस्कोपबाट हेर्न चाहनुहुने महानुभावका लागि शुक्रबार राति साढे ११ देखि साढे चार बजेसम्म विशेष व्यवस्था गरिएको सोसाइटीले जनाएको छ ।रासस